Siddee Ayuu Ahaan Jiray Jaceylkii Horre? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Cabdicasiis Maxamed Shidane, June 24, 2018
Nasa oo Saldhig Joogta Ah Ka Samaysanaysa Dayaxa ITukesomalism.com
Afrikaan, October 13, 2019
Maxamuud Axmed Muuse — September 16, 2018
Dunida aynu kuwada nool nahay waxa ay soomartay marxalado aad ukala duwan, midkastaana waxa uu watay waayihiisa, arrinkasta oo dhacana waxaa jirtay qaab iyo xeelad lagu maarayn jiray, laguna xalin jiray. Waayo waayo iyo heerar kala duwan ayuu soomaray jacaylka, inkasto ay dadyawga dunida ku kala nooli ay ku kala duwanaayeen xagga dhaqanka.
Soomaaliyana wajiyo kala duwan ayuu ku soomaray iyadoo waliba intii koonkaan jirayba waxaa xaqiiq ah in uu jiray jacayl, waana mid ku uunnaa ummadkasta qalbiyadooda.
Laga soobilaabo xilligii dunidaan la abuuray, aadanaha lagu sharaxay ilaa Xaawo iyo Aadan jacaylku wuu jiray marxalad kasta ha soomaree. Marka laga hadlaayo jacayl, waxaan kawadnaa ama lagu macneeyaa Caashaqa kaaso ku dhaca laba qof oo iscalmaday sida wiil iyo gabar ama si kale haddaan u dhigno lab iyo dhedig dubaaqoodu isa siiyay in ay is hantaan howl kasta ha umareene.
Waa tii uu lahaa qoraaga buuggaan isagoo ka hadlaya jacaylka:
Jabad lama wada dageen
Jid lama wada mareen
Jiil cusub ma dhasheen
Shaki baa ku jiri lahaa
Jamaal iyo jamaad
Jacayl kuma wada dhasheen
Adduunyadaan ma wada joog nayn
Jaan dheer ma wada cayaar neen
Jacaylna ma wada jilnayn
Soomaalidii hore waxay ahaayeen dad dhaqan leh, kala danbeeya. Waxaa jiri jirtay in ragga soomaalida safar ugu bixi jireen wadamada aan jaarka nahay ilaa bariga dhexe, carabaha IWM.
Waxaana laysku qabay kalsooni buuxda labada ruux ee jacaylka dhabta ah isku qaba, waxaana lakala maqnaan jiray sanado badan, shakina ma kala gali jirin, qof walba waxa uu aamin sanaa ruuxa kale in uusan burin doonin wacadki iyo balantii adkayd in uu ilaalin doono qofkasta. Wiilka iyo gabadha marka ay haasaawe tagayaan waa ay adkayd in si fudud laysku helo, wiilku waxa uu umari jiray rafaad iyo dhib badan. Gabadhuna sidaa si lamida ayay iyaduna ahayd.
Waqtigii hore xiliga haasawaha waxaa lays waydaarsan jiray hal xiraalo, maahmaahyo iyo maasooyin. Ruuxa la waydiiyaa hadduu garto ama ka jawaabo waxaa ku godnaan jiray far, il gooniyana waa lagu eegi jiray. Tusaale yar oo fudud haddaan sooqaato, nin ayaa u soo haasaawo tagi jiray gashaanti gurigeeda jiifta, waxa uu imaan jiray wiilka guriga gabadha, ka dibna waa kicin jiray isagoo iska dhowraya sharqanta si aysan umaqal dadka guriga iyo ardaaga ujiifa.
Marka ay gabadhu kacdo ayna garato in loosoo shukaansi tagay, waxay samayn jirtay si tartiib ah ayay suxulka umudan jirtay ka dibna saddex su’aalood ayay ku bilaabi jirtay.
Waxayna oran jirtay
Kor maxaa kala timid?
Kaadka maxaa dhigatay?
Maxaa igula kor joogtaa?
Wiilka markaas oo kale wuxuu oran jiray:
Kor waxaan kala imid kaskayga
Kaadkana waxaan dhigtay Kabahayga
Waxaan kula kor joogaa maankayga ama haasaawaan kula kor joogaa.
Mararka qaarna waxaa laysku dhiibi jiray sarbeebooyin midaaso lagu eegayo garaadka wiilka ama gabadha. Haddii wiilka ama gabadhu garato sarbeebtaa waxay ahayd guri gal ah oo lagu hirto ragguna ku goolaaftami jireen. Haddaan sooqaato heesti sarbeebtu ka marnayn ay iswaydaarsanaayeen fanaanadi weynayd Hibo Nuura iyo Cabdo Cali.
“Ruux hadduu budo keeno iyo biyo kii la yimaada Allow yaa isku beegga waa isku baahan yihiin. Badweyn roob ku da’aaya baad ka soobixin maayo, ban abaar lagu riiqay Allow yaa iskubeega waa isku baahan yihiine. Aqal banaan laga taagay bartanka tiir ku lahayn iyo udub meel ku basaasay Allow yaa isku beega waa isku baahan yihiine. Daar weynoo la bineeyay, balaaranoo kala jiidan oo wax bidhaabamona lahayn iyo ileys yaala banaan Allow yaa isku beegga waa isku baahan yihiine. Labaddii isla barbaarta, beerkana iska jeclaada, inay sooban dhigaana ka baqaaya jacaylka Allow yaa isku beegga waa isku baahan yihiine.”
Sidaa si lamida ayay dadkii hore isku waydaarsan jireen haasaawe micno ku fadhiya dadkuna ay ka dhaxli jireen murti. Inta badan Soomaalida waxaa lagu tiriyaa wadanka abwaanada, wax kalena ma ahan dadku waxay uqayb samaan mid gabya iyo mid xifdisan , taasna waxay keentay in ay la dhoho wadankii abwaanada. Waayadii hore waxaa adkayd in raggu ku cataabo jacayl ama ku sheekeeyo waxayna ahayd arin ceeb ah qofkii laga maqlo jacayl, inta badana waxay iska ahayd huursan. Qofkii laga maqlo isagoo ku maasoonaya jacayl waxaa loohaystay in uu yahay qof waalan ama nacas sida aad ka dhaxli karto maasooyinki Soomaaliya.
Waxa malahayga ugu caansan dadkuna ka wada dheregsan yihiin aabbihii jacaylka Cilmi Boodhari oo ahaa ruux taariikhda lagu hayo gayiga soomaaliya afkiisa furtay jacayl awgii, gabayo badana u tirshay Hodan oo ahayd gabadhii uu jeclaa. Malahayga haddaan ka sooqaato mid ka mid ah gabayadiisii laga hayo
Cilmi Boodhari waxaa ka mid ah:
Caruurtay sideen meesha iyo Ciise Nebigiiye (CS)
Kuwii ii calaacalaayey baan camal tusaalayne
Sida weelka caanaha haddii laabta loo culayo
Bal aan soo cidaade maxaa cunaha dhaafaya
Caqliga yaa ka biin tuu Illaah ku cir-cadeeyay
Casharkay wadaadu qoreen cudurkaan goyn waaye
Cilmi iyo daawaba doontay oo waayay cilinkiiye
Illeyn caashaq lama maydhi karo kugu cirrooloobey
Markale waa tii uu lahaa Cilmi Ismaaciil Liibaan (Boodhari) gabaygiisii calaacalka aha:
Sidii geel harraadoo wax badan hawdka miranaayay
Oo hara la soo joojiyoo kuraygu heegaayo
Oo hoobey loo qaaday iyo hadal wal-waaleedka
Ayadaan xabaal lagu ham siin waanan ka hadhayne
Hammada beena baan iri malaha waa la hurudaaye
Hareertayda oo madhan baan is iri haabo gacanteeda
Goortaan hubsaday meel cidla ah inaan ku howshooday
Hoogaansigeedii dambaan soo habaabiraye
Siday iga halleeyeen maryihii hiifay oo tumaye
Haab-haabtay labadii go’oo shaarkii maan heline
U handaday sidii geel biyaha hoobay loo yiriye
U hiqleeyey sida naag la yiri huray dalaaqdaaye
Wax aanad haynin ood ku hamidaa hadimo weeyaane
Hoheey iyo ho-heey maxaa hoodaamo la ii geystey
Sida ku cad gabaygaa waxaan ka dhadhansanaynaa in ay yarayd in loo calaacalo dumar jacayl awgiisa. Qofkii lagu arkana waxaa la oran jiray kani waa mid hor liite ah ma naqaan in isla wayni jirtay iyo in ay ceeb u arkaayeen. Jacaylkuna sidiisaba ma yaqaan ceeb, wanaag iyo xumaantoona, mana lahan dhego wax lagu maqlo, mana lahan indho wax lagu arko balse waxa u yaqaan ruuxii uu calmaday oo keliya. Haddaba, waxaa jirtay wayadii hore caqabado waa weyn oo hortaagnaa labada qof oo shukaansiga ka dhexeeyo waxaana ugu weyneyd ma haysan waxa aan hadda haysano oo isgaarsiinta ah. Waxaa laga yaabi jiray in sanadkiiba is arkaan labada qof oo shukaansiga ka dhexeeyo, ama ka badan balse dadkii hore waxaa la tirsan jiray waqtiga, waxaana bartilmaameed u ahaa xidigaha iyo xiliyada.
Dabcan labada qof waxay oran jireen waxaa inoo balan ah biyo gu ama biyo dayreed marka roob da’o ciduhuna ay ku soo guryo noqdaan, ama waxaa la oran jiray xili hebel habeenka uu xigida hebel uu marayo amintuna tahay galinkaa ayaa inoo balan ah meel heblana waa isugu imaan.
Mar mar waxaa dhici jirtay in fariimaha laysugu dhiibo dad safaro ah oo la yiraahdo hebelow fariintaa iga gaarsi heblaayo una sheeg in aan bad qabo halkaasna ku suganahay una soo socdo. Tusaale waxaan usoo qaadanaynaa gabaygii ahaa Saynab waad heli, uu tiriyay abwaan ka mid ahaa abwaanadi hore, wuxuuna yiri:
Saalaxoow adaa soconayoo qaatay salabkiiye
Salaama Allayeelyow haddaad saaxil nabad gaadho
Sawd yar aan ku faro iiga gee Saynab waad heliye
Saqda dhexe habeenkii hurdada waan ka salalaa dheh
Soortana ma cunno aawadaa saa’im saan ahayn dheh
Saddex goorta aan qado ayaan subax quraacdaa dheh
Waxaan sararo weynaa baryahaan samay ka dhuubnaa dheh
Saraawiiisha waa iga bateen igu samaysnaa dheh
Hadba aniga oo soconayaa sare u qaadaa dheh
Salaan qudha haddaad soodirtoo subax la ii keeno
Adiga oo sariir ila fadhiya kama sokeyseen dheh
Sidii aan santari gaadh hayoo saami lagu qaybshay
Sidhka gaadhiyadaan kaa dayaa, saan u taaganahay dheh
Ma samrine sidaad ii ogeyd waan ku sugayaa dheh
Waxaa iyana jirtay oo caqabadaha ka mid ahaa in qofka fariin wadaha ah uu wax ka bedelo qaabkii ama sidii wax loo soofaray. Taasna ay dhib ku ahayd lammaanayaashaas jacaylka isla meel dhigay. Mararka qaar waxaa dhici jirtay in qofka fariin wadaha ah uusan aadin qofkii wax loogu soodhiibay taas ay keento in lakala irdhoobo ama lakala quusto markii wax khabar ah layska waayo.
Inta badan dadkii hore waxaa ugu weyn ee lays fari jiray ahayd maasada qaybaheeda kala duwan iyo hadalo sarbeeb ah uusan fahmayn kan fariin wadaha ah balse ay isla fahmayaan labada ruux ee xiriir jacayl ka dhexeeyo.
Dadkii hore waxay ku wacnaayeen ma lahayn asxaab badan, tusaale gabadhu waxay ahayd mid leh hal saaxiib oo ah gabar wiilkana sidaa si lamid ah taasna waxay keeni jirtay in lays aamino, diradiraale meesha soo galin. Soomaalidu waxay dhahdaa (Dadna waa dadkii hore hadalna intuu yiri), marke jacayl waa kii hore murtidiisiina la tag.
Tags: Siddee Ayuu Ahaan Jiray Jaceylkii Horre?
Next post Maxaad Ka Taqaan Jaceylka Maanta Jira?
Previous post Jaceylkii Horre iyo Kan Maanta Jira!